KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Wɔato aba ayi ɔsɔfopɔn Jorge Mario Bergoglio, S.J., sɛ Ɔsɔfo Kunini (Pope). Ɔno ne Petro nanmusini a ɔtɔ so 265.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARCH 13, 2013.
“Ɔsɔfo panin a ɔwɔ Rome no korɔn na ɔwɔ dibea sene obiara wɔ Asɔre no mu, efisɛ ɔno ne Ɔhotefo Petro nanmusini. Ɔnyaa saa tumi no fii Yesu Kristo hɔ.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, BY VINCENT ERMONI.
‘Roman Pope na ɔdi Ɔkronkronni Petro adeɛ na ne dibea korɔn sene obiara. Sɛ obi gye wei ho kyim a, wabɔ mmusuo [kyerɛ sɛ ɔyɛ otuatewfo]’—VATICAN ABADWAFO NHYIAM A ƐDI KAN, JULY 18, 1870.
KATOLEKFO ɔpepem pii a wɔwɔ wiase no deɛ, asɛm a Vatican Badwa no de too dwa afe 1870 mu no yɛ asɔre no nkyerɛkyerɛ a obiara ntumi nsesa no. Nanso nea ɛsɛ sɛ yɛbisa ne sɛ, saa asɛm no yɛ Bible nkyerɛkyerɛ anaa? Afei nso ɛyɛ ampa sɛ Pope Francis na ɔredi ɔsomafo Petro adeɛ? Ka a wɔka sɛ Petro yɛ pope a ɔdi kan no nso ɛ, ɛyɛ ampa?
‘ƆBOTAN YI SO NA MEDE M’ASƆRE BƐSIE’
Asɛm a ɛwɔ Mateo 16:16-19 ne Yohane 21:15-17 no, ɛno na ɛmaa Vatican Badwa no de too dwa wɔ afe 1870 mu sɛ Roman Pope na ɔdi Petro adeɛ. Nkɔmmɔ a ɛkɔɔ so wɔ Yesu ne Petro ntam ne nsɛm foforo a ɛwɔ Bible mu no ma yɛhu sɛ na ɔsomafo Petro di dwuma titiriw bi wɔ tete Kristofo no mu. Bere a ɛdi kan a Yesu ne Petro hyiae no, Yesu kaa sɛ Petro bɛda su a ɛte sɛ ɛboɔ adi wɔ n’asetenam. (Yohane 1:42) Nanso, ɛno kyerɛ sɛ Kristo maa Petro dibea a na ɛkorɔn kyɛn obiara?
Sɛ yɛkenkan Mateo 16:17, 18 a, ɛhɔ na Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Mese wo sɛ: Wone Petro na ɔbotan yi so na mede [m’asɔr, Fante Bible] bɛsie.” * Edin Petro no, ase kyerɛ “Ɔbotan.” Nanso asɛm a Yesu kae yi, na ɔrepɛ akyerɛ sɛ ɔde ‘n’asɔre’ anaa n’asafo bɛsi Petro a ɔyɛ onipa no so? Petro na na ɔbɛyɛ Yesu akyidifo nyinaa mu kɛse anaa? Sɛn na asomafo a na wɔwɔ hɔ no faa Yesu asɛm no? Sɛ wokan Nsɛmpa no a, wobɛhu sɛ bere a Yesu ne asomafo no bɔɔ saa nkɔmmɔ no, akyiri yi wɔgyee akyinnye mpɛn pii sɛ hwan na ɔyɛ wɔn mu kɛse. (Mateo 20:20-27; Marko 9:33-35; Luka 22:24-26) Sɛ Yesu de tumi a ɛte saa maa Petro a, anka asomafo no bɛgye nea ɔyɛ wɔn mu kɛse no ho akyinnye anaa?
Petro ankasa tee Yesu asɛm no ase sɛn? Ná Petro yɛ Israelni, enti ɛbɛyɛ sɛ na ɔnim nkɔmhyɛ a ɛwɔ Hebri kyerɛwnsɛm no mu a ɛfa “ɔboɔ” anaa “tweaso tiboɔ” anaasɛ tweatiboɔ ho no. (Yesaia 8:13, 14; 28:16; Sakaria 3:9) Bere a Petro kyerɛw krataa kɔmaa ne nuanom Kristofo no, ɔkyerɛɛ mu sɛ ‘tweatiboɔ’ a na wɔahyɛ ho nkɔm no ne Awurade Yesu Kristo, Mesia no. Petro de Hela asɛmfua pe’tra na ɛyɛɛ adwuma, na Kristo nko ara na ɔde kaa ne ho asɛm. Saa asɛmfua koro no ara na Yesu de yɛɛ adwuma wɔ Mateo 16:18.—1 Petro 2:4-8.
Ɔsomafo Paulo nso, na ɔyɛ Yesu akyidini mapa. Wohwɛ a, na Paulo gye di sɛ Yesu ama Petro tumi sene obiara? Ná Paulo gye tom sɛ Petro di dwuma titiriw wɔ tete Kristofo asafo no mu, na ɔkaa sɛ Petro ka wɔn a “wɔbu wɔn sɛ adum” no ho. Enti Paulo deɛ sɛ ɔka “adum” a, na ɛnyɛ baakofo ho asɛm na ɔreka. (Galatifoɔ 2:9) Bio nso, sɛ na Yesu adi kan apaw Petro sɛ asafo no ti a, adɛn nti na ne mfɛfo Kristofo no anka sɛ ɔyɛ edum, na mmom wɔkaa sɛ wɔbu no sɛ edum?
Bere bi Paulo huu sɛ sɛnea Petro ne nnipa bi te no, ɛmfa ne kwan mu. Wei nti Paulo amfa fɛre ankatakata nneɛma so, mmom ɔkaa sɛ: “Megyinaa n’anim kasa tiaa no ɛfiri sɛ na wadi mfomsoɔ bi.” (Galatifoɔ 2:11-14) Paulo anya adwene sɛ Kristo de n’asɔre anaa n’asafo asi Petro anaa onipa foforo biara so. Ɔno deɛ, na ɔgye di sɛ wɔde asafo no asi Yesu Kristo so, na ɔno ne asafo no fapem. Enti Paulo fam no, na “ɔbotan no ne Kristo.”—1 Korintofoɔ 3:9-11; 10:4.
“WONE PETRO . . .”
Ɛnneɛ, Yesu asɛm a ɔse: ‘Wone Petro, na ɔbotan yi so na mede m’asɔre bɛsie’ no kyerɛ sɛn? Sɛ obi ka asɛm bi na wopɛ sɛ wote ase yie a, gye sɛ wohu nea enti a ɔkaa asɛm no. Sɛ saa a, dɛn koraa na na Yesu ne Petro reka ho asɛm? Yesu bisaa n’asuafo no sɛ: “Mose me ne hwan?” Petro antwentwɛn so koraa na ɔbuaa sɛ: “Wone Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba!” Mmuaeɛ a Petro mae no nti, Yesu kamfoo no. Afei ɔka kaa ho sɛ ɔde ‘n’asɔre’ anaa n’asafo bɛsi “ɔbotan” bi so. Saa ɔbotan no na na Petro akyerɛ sɛ ɔwɔ mu gyidie no; ɔbotan no ne Yesu ankasa.—Mateo 16:15-18.
Yesu asɛm a ɛse: ‘Wone Petro, na ɔbotan yi so na mede m’asɔre bɛsie’ no kyerɛ sɛn?
“Asɔre Agyanom” pii foa so sɛ ɔbotan a wɔka ho asɛm wɔ Mateo 16:18 no ne Kristo. Ɛho nhwɛso ne sɛ Yesu wuo akyi bɛboro mfe 450 no, Augustine kyerɛwee sɛ, “Awurade kaa sɛ: ‘Ɔbotan yi so na mɛsi m’asɔre’, efisɛ na Petro adi kan aka akyerɛ Yesu sɛ: ‘Wone Kristo, Onyankopɔn teasefoɔ no ba.’ Yesu nso ka kyerɛɛ Petro sɛ ɔbotan a woaka ho asɛm yi so na mede M’asɔre bɛsie.” Augustine kaa no mpɛn pii sɛ, “Ɔbotan no (Petra) ne Kristo.”
Yɛhwɛ nea Katolekfo a wɔwɔ hɔ nnɛ gye di ne nea Augustine ne afoforo kae no a, ɛnneɛ sɛ saafo no te ase a, anka wɔbɛbu wɔn atuatewfo. Switzerlandni nyamekyerɛni Ulrich Luz nso kaa sɛ, ɛnnɛ, adwene a Bible ho abenfo kura wɔ saa asɛm yi ho no, anka Vatican Abadwafo a wɔhyiaam afe 1870 no bɛbu wɔn atuatewfo.
POPE—ƆNO NA ƆDI PETRO ADEƐ?
Ná ɔsomafo Petro nnim abɔdin “pope” no ho hwee. Nea ɛwom ne sɛ asɔfopɔn pii a wɔnyɛ Romafo nso de abɔdin no frɛɛ wɔn ho kɔsii afe 900 mu. Ɛno mpo no na wɔntaa mfa nyɛ adwuma sɛ abɔdin titiriw biara kɔsii afe 1,100 awiei mu hɔ. Afei nso, tete Kristofo no ansusu sɛ wɔde dibea a ɛkorɔn ama Petro na sɛ ɔwu a ebinom bɛba abɛdi n’adeɛ. Ɛno nti ɔbenfo Martin Hengel a ɔfi Germany kaa sɛ, “abakɔsɛm ho akyerɛwfo ne nyamekyerɛfo biara nni hɔ a wɔbɛtumi akyerɛ nea ɛyɛe a popenom ‘tumidie’ bae.”
Wohwɛ nea yɛaka yi nyinaa a, wobɛyi nsɛmmisa a ɛdidi so yi ano sɛn? Wohwɛ a Petro yɛ pope a ɔdi kan, na ɔwɔ ananmusifo? Afei nea Katolekfo kyerɛkyerɛ sɛ Pope korɔn na ɔwɔ tumi sene obiara no, saa na Bible no ka? Nsɛmmisa yi nyinaa ho mmuaeɛ yɛ dabi. Nanso, akyinnye biara nni ho sɛ Yesu de n’asɔre anaa n’asafo a ɛyɛ nokware no sii ɔno ankasa so. (Efesofoɔ 2:20) Ɛnneɛ, ɛhia sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ, Nokware asafo no, mahu anaa?
^ nky. 8 Kyerɛwnsɛm a ɛwɔ saa asɛm yi mu nyinaa fi Twerɛ Kronkron Asante Twi Bible no mu.
Nea Ɛyɛe a Popenom Tumidie Bae
Afe 32: Yesu kaa sɛ ɔbɛsi n’asɔre anaa n’asafo asi ɔno ankasa so; wanka sɛ ɔsomafo Petro bɛnya tumi a ɛkorɔn sene obiara
Afe 55-64: Asomafo Paulo ne Petro kyerɛwee wɔn nkrataa ahorow, na wɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ Yesu nko ara ne Kristofo asafo no fapem
Afe 254-257: Roma sɔfopanin Stephen fii ase kekaa sɛ ɔyɛ Petro nanmusini enti ɔkorɔn sene asɔfo mpanimfoɔ a wɔaka no, nanso asɔfo mpanimfoɔ te sɛ Firmilian a ɔfiri Kaesarea ne Cyprian a ɔfiri Carthage ne no anyɛ adwene
Afe 296-304: Saa bere yi na wɔhuu nkyerɛwee a ɛdi kan a ɛdi adanse sɛ wɔde abɔdin “papa,” anaa “pope” frɛɛ ɔsɔfopanin a ɔwɔ Rome
Afe 500 mu: Roma sɔfopanin bi nso a ne din de Leo I, gyinaa asɛm a ɛwɔ Mateo 16:18 so kaa sɛ ne dibea korɔn sene asɔfo mpanimfoɔ afoforo
Afe 600 mu: Wɔfirii ase de papa (pope) dii dwuma kɛse sɛ abɔdin maa ɔsɔfo panin a ɔwɔ Rome no, nanso asɔfo mpanimfoɔ a wɔnyɛ Romafo nso kɔɔ so de abɔdin pope no frɛɛ wɔn ho kɔsii afe 900 mu
Afe 1075: Sɛnea abakɔsɛm kyerɛwfo bi kae no, Gregory VII de too dwa sɛ abɔdin “pope” no yɛ Roma sɔfopanin nko ara dea. Roma sɔfopanin a wabɛyɛ pope nko ara na ɔkura tumi a yɛfrɛ no Dictatus Papae (Tumi a Pope no wɔ); “ɛte sɛ nea ɔno nko ara na ɔtumi gyina Kristo ananmu”
Afe 1870: Vatican Badwa a Ɛdi Kan no yɛɛ no mmara sɛ “Roman Pope na ɔdi Ɔhotefo Petro adeɛ. Petro na ɔyɛ Asomafo no Panin ne Kristo Nanmusini na Asɔre no nyinaa, ɔno na ɔda ano”